Raw Material Vagadziri & Suppliers |China Raw Material Factory
Plantation & Organic Kurimwa
Gadzirisa Organo Goridhe Organ...
Ganoderma Cafe Inopisa Inotengesa ...
Bulk Organic Cell-wall yakaputswa...
Ina Sigmatic Mushroom coff...
Chaga, inozivikanwa seInonotus obliquus, mushonga wefungus inokura pamiti michena yebirch.Inonyanya kukura kuchamhembe kwehemisphere pa40 ° ~ 50 ° N latitude, kureva, Siberia, Far East, Northern Europe, Hokkaido, North Korea, Heilongjiang kuchamhembe kweChina, Changbai Mountain muJilin, nezvimwewo.
Coriolus versicolor - inozivikanwawo seTrametes versicolor uye Polyporus versicolor - ihwo howa hwepolypore hunowanikwa pasirese.
Coriolus versicolor mushonga wehowa wakatemerwa zvakanyanya prophylaxis uye kurapwa kwegomarara uye kutapukira muChina.Zvakaratidzwa zvakanyanya kuti izvo zvinongedzo zvakawanikwa kubva kuCoriolus versicolor zvinoratidza huwandu hwakawanda hwezvinhu zvipenyu, kusanganisira zvinokurudzira zvinokonzeresa pamaseru ekudzivirira ekudzivirira uye kudzivirira kukura kwegomarara.
Shiitake howa (zita resainzi: Lentinus edodes) anonzi Shiitake kuJapan.Shiitake howa hwakarimwa muChina kwezviuru zvemakore.Shiitake howa dzine zvakasiyana siyana zvebiologically active ingredients izvo zvakasimbiswa netsvakiridzo yesainzi.Ivo vanoita basa rakakosha mukugadzirisa kusadzivirirwa, kuwedzera hutano hwemapfupa, kuderedza cholesterol uye kukurudzira hutano hwemoyo.
"Maitake" zvinoreva kutamba howa muchiJapan,zita rayo rechiLatin: Grifola frondosa.Howa uhu hunonzi hwakazowana zita rahwo mushure mekunge vanhu vatamba nemufaro pakuhuwana kusango, ndiwo hunhu hwahwo hunoshamisa.
Grifola frondosa ine zvakasiyana-siyana zvebiologically active ingredients izvo zvakasimbiswa netsvakiridzo yesainzi.Ivo vanoita basa rakakosha mukudzikisa BP, kuderedza shuga yeropa, kuwedzera kusadzivirirwa, anti-kuzvimba, uye anti-allergic.
Cordyceps militaris (zita resainzi:Cordyceps militaris) uye Cordyceps sinensis (zita resainzi: Cordyceps sinensis), inozivikanwawo sesimba howa, inowanzoshandiswa mumushonga weChinese kudyisa mapapu neitsvo, nekudzivirira moyo.
Shumba's Mane Mushroom Powder
Shumba's mane (Hericium erinaceus) imhando yehowa hunorapa.Yakashandiswa kwenguva refu mumishonga yechinyakare yeChinese, mane yeshumba inowanikwa zvakanyanya mufomu yekuwedzera.Tsvagiridzo yesainzi inoratidza kuti mane yeshumba ine zvinhu zvakati wandei zvinosimudzira hutano, zvinosanganisira antioxidants uye beta-glucan.
Shumba's mane mushroom ine zvakasiyana-siyana zvebiologically active ingredients izvo zvakasimbiswa netsvagiridzo yesainzi.Inoita basa rakakosha mukudzivirira dumbu, kugadzirisa tsinga dzehuropi, kuvandudza ndangariro uye kugona kwekuziva, nezvimwe.
Ganoderma lucidum extract ndiwo muchero mutsva wakaibva muviri wakakohwewa nenguva.Mushure mekuomeswa, inotora mvura inopisa (kana kutorwa kwedoro), vacuum concentration, spray drying uye mamwe maitiro ekuwana Ganoderma lucidum extract powder, iyo yakakwirira-concentration yeGanoderma lucidum powder.
Organic Cell-wall yakaputsika Ganoderma lucidum Spore poda
Ganoderma spores ndiwo masero ekubereka ane hupfu anobviswa kubva muvharo yeGanoderma mushure mekunge miviri yezvibereko yakura.Imwe neimwe spore inongova 5-8 microns mudhayamita.Iyo spore yakapfuma mune zvakasiyana bioactive zvinhu zvakaita seGanoderma polysaccharides, triterpenoids ganoderic acid uye selenium.
Coriolus versicolor uye Polyporus versicolor - yakajairika polypore howa inowanikwa pasirese.Zvichireva 'yemavara akati wandei', versicolor inonyatso tsanangura fungus iyi inoratidza mavara akasiyana.Semuenzaniso, nokuti chimiro chayo uye mavara akawanda akafanana neaya emusango, T. versicolor inowanzonzi turkey muswe.
Organic Ganoderma Yehutano Kuchengetedza Chigadzirwa
GanoHerb organic ganoderma sinense zvimedu zvakachekwa kubva kutsva-yakanyatsosarudzwa log-yakarimwa organic ganoderma sinense fruiting miviri.Zvimedu zvakachekwa zvakanaka zvinogona kushandiswa zvakananga mukugadzira ganoderma tii, kubika muto uye kubika waini.Isarudzo yakakwana yekuchengeta hutano hwemazuva ese, kurapwa kwekudya uye kuratidza sechipo.1. Tsanangudzo: 20kgs / bhokisi 2.Main Functions: Inogona kubatsira kupa hutano hwevashandisi uye kubvisa malaise, kukosora, asthma, palpitation uye anorexia.3.Kushandisa &...
Wholesale Mutengo Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Oil Softgel
Oiri yespore iyi iri kushandisa supercritical CO2 yekubvisa tekinoroji kuburitsa kubva kune yakapera dehydrate mature spores, ayo anogadzirwa kuburikidza nematanho ekunhonga, kuchenesa, kuongorora, kuderera-kupisa kwemuviri kusero-kupwanya kwemadziro.
Kambani yedu ndiyo Drafter yeChinese National Standard yeGanoderma lucidum (kana inodaidzwa kuti Reishi), Ganoderma lucidum (kana inonzi Reishi) miviri mikuru inosanganisa iGanoderma Lucidum(reishi) Polysaccharide neTriterpene.
Organic Ganoderma lucidum (Reishi) Mutengesi ane USA, EU, Japan neChina organic certification.ISO, HACCP, Halal, Kosher, uye FDA yakasimbiswa.
Muenzaniso wemuchero wemahara